Dɛn Nti na Yehowa Adansefo Siesie Wɔn Ho Kama Kɔ Asafo Nhyiam Ahorow?
So mfonini ahorow a ɛwɔ nhomawa yi mu no ama woahu sɛnea Yehowa Adansefo siesie wɔn ho kama bere a wɔrekɔ wɔn asafo nhyiam ahorow no? Dɛn nti na yɛn ntadehyɛ ne yɛn ahosiesie ho hia yɛn saa?
Yɛde da obu adi kyerɛ yɛn Nyankopɔn. Ɛyɛ nokware sɛ ɛnyɛ nea aniwa hu nko na Onyankopɔn hwɛ. (1 Samuel 16:7) Nanso, sɛ yehyiam sɛ yɛresom Yehowa a, nea ɛda yɛn koma so ne sɛ yɛbɛda obu adi akyerɛ ɔno ne yɛn mfɛfo a yɛne wɔn som no no. Sɛ yɛrekɔ ɔtemmufo bi anim wɔ asɛnnibea a, ɛda adi sɛ obu a yɛwɔ ma ne dibea nti, yɛbɛhwɛ yɛn ntadehyɛ ne yɛn ahosiesie yiye. Saa ara na ahosiesie a yɛde kɔ yɛn asafo nhyiam ahorow no kyerɛ sɛ yɛn ani sɔ Yehowa Nyankopɔn, “asase nyinaa temmufo no,” ne baabi a yehyiam som no no.—Genesis 18:25.
Yɛde da yɛn suban adi. Bible hyɛ Kristofo nkuran sɛ wɔmfa “fɛre ne adwenemtew” nhyɛ ntade a ɛfata. (1 Timoteo 2:9, 10) Sɛ yɛde “fɛre” hyɛ yɛn ntade a, yɛrenhyɛ ntade a ɛyɛ kyenkyenenn, nea ɛkanyan nna ho akɔnnɔ, anaa nea ɛma yɛn ho gu hɔ a ebetumi atwetwe afoforo adwene aba yɛn so. Afei nso “adwenemtew” boa yɛn ma yɛpaw ntade a ɛyɛ fɛ a ɛnyɛ basaa anaa ɛmfata. Saa nnyinasosɛm yi ma yɛn mu biara kwan ma ɔpaw ntade a ɔpɛ. Yɛn ahosiesie a ɛfata no ma ‘yɛn Agyenkwa no nkyerɛkyerɛ ho ba nyam,’ na ‘ɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam’ bere a yemmue yɛn ano mpo. (Tito 2:10; 1 Petro 2:12) Sɛ yesiesie yɛn ho kama kɔ yɛn nhyiam ahorow a, ɛboa ma afoforo nya Yehowa som ho adwempa.
Nnya adwene sɛ wunni ntade pa nti woremma Ahenni Asa so. Ɛho nhia sɛ yɛn ntade yɛ nea ne bo yɛ den anaa nea aba so ansa na yɛabu no sɛ ɛyɛ nea ɛfata anaa edi mũ.
Dɛn nti na sɛnea yesiesie yɛn ho no ho hia bere a yɛresom Onyankopɔn no?
Nnyinasosɛm bɛn na yegyina so paw ntade a yɛhyɛ ne sɛnea yesiesie yɛn ho?
Dɛn Nti na Yehowa Adansefo Siesie Wɔn Ho Kama Kɔ Wɔn Asafo Nhyiam Ahorow?